Negritô - Wikipedia
Vehivavy negritô, isan' ny vahoaka Aeta any Panay any Filipana.
Ireto ireo vahoaka negritô: ny Andamaney tompo-tany (Andamaney-Lehibe, Jaraoà, Ônga, Sentinely) ao amin' ireo nosy Andamàna; ny Negritô ao amin' ny Saikanosin' i Malezia, isan' izany ny Semanga (isany ny Bateka), ny Senôy, ny Manika (na Many) ao amin' ny tapany atsimon' i Tailandy; ny Aeta (ao amin' ny nosy Luzon), ny Aty sy ny Tomandôka (ao amin' ny nosy Panay), ny Batàka, ny Agta ao Sierra Madre, ny Sambala, ny Mamanoà ao amin' ny nosy Mindanaô ary foko hafa miisa eo anelanelan' ny 25 sy 34 ao Filipina.
Ny Negritô dia taranak' ireo olombelona môderna voalohany tonga tao amin' ireo faritra ireo tany amin' ny 50 000 hatramin' ny 70 000 taona lasa. Mivelona amin' ny fihazana sy ny fiotazana izy ireo. Nifangaro tamin' ny vahoaka bengaley sy vahoaka miteny môn-kmera ary aostrôneziana tonga taty aoriana tao amin' ireo faritra ireo izy ireo. Ny vahoaka negritô sasany dia nanjary mpamboly sady nandray ny fitenin' ireo vahoaka tonga taoriana ireo.
Na dia mifanahaka aza ny endrika ara-batan' ireo vahoaka atao hoe Negritô ireo dia manjavozavo sy efa tranainy loatra ny maha mpihavana ara-poto-tarazo azy, ka ahitana soritra ny fisian' ny andiam-pifindrà-monina nifanesy samihafa izany.
1 Ireo vahoaka negritô
1.1 Ny Andamaney
1.2 Ny Semanga
2 Fomba fiainana sy kolontsaina
4 Ny toetra ara-batana
Ireo vahoaka negritôHanova
Ny Andamaney dia vahoaka tompon-tany ao amin' ireo nosy Andamàna. Ireo nosy Andamàna ireo dia ao amin' ny fari-tanin' ny Firaisana Indiana izay 800 km ao atsimo-atsinanan' i India ao amin' ny Helodranon' i Bengaly, ao amin' ny ranomasina manandrify ny morontsirak' i Mianmara (na Birmania). Miisa dimy ireo vondrom-poko andamaney, dia ny Andamaney-Lehibe, ny Jangly, ny Jaraoà, ny Ônga ary ny Sentinely.
Ny Semanga dia vondrom-poko ao Perak sy Pahang sy Kelantan ary Kedah any Malezia sy ao amin' ireo faritany atsimo any Tailandy. Efa talohan' ny taonjato faha-3 izy ireo no nanomboka nonina tao amin' ny Saikanosin' i Malezia. Vahoaka mpifindrafindra toeram-ponenana izy ireo, izay mivelona amin' ny fihazana sy ny fiotazana. Ny Semanga dia avondrona ao amin' ireo foko hafa atao hoe Ôranga Asly (Orang Asli).
Fomba fiainana sy kolontsainaHanova
Na tamin' ny tenatenan' ny taonjato faha-20 aza ny ankamaroan' ny Negritô dia olona mpifidrafindra monina mpihaza sy mpioty. Na izany aza dia misy ireo sasany izay lasa mpamboly tahaka ireo mponina hafa tonga tsikelikely nanodidina azy, indrindra ny Aostrôneziana ao amin' ny faritra roa (Filipina sy Saikanosin' i Malezia).
Ny Semanga any Malezia dia nanamboatra fitafiana tamin' ny hodi-kazo sady nonina tanaty lavabato na tanaty aloka vita amin' ny rantsan-kazo.
Ny Andamaney, na dia nahafantatra ny fampiasana ny afo aza, dia tsy nahay nanamboatra izany talohan' ny nahatongavan' ny vahoaka avy any ivelany.
Tamin' ny findohan' ny taonjato faha-21 dia lasa niorim-ponenana ny ankamaroan' ny Negritô, niharan' ny fanatontoloana ny fiainany, nivelona amin' ny fikaramana sy ny fifanakalozana, sahala amin' ireo mponina manodidina azy, na dia mbola mahalala sy mbola mampita ny fahalalana nahafahan' izy ireo niaina tanany tontolo sarotra ireo mbola ntaolo fiainana.
Ny tompon-tany ao amin' ireo nosy Andamàna (ny Andamaney) no nitahiry ny fiteniny tany amboalohany (fiteny andamaney). Ny anton' izany dia ny fifampikasohany vao tsy ela tamin' ireo vahoaka hafa izay niseho tamin' ny taonjato faha-19.
Ny Negritô any Filipina sy any amin' ny Saikanosn' i Malezia dia niharan' ny tontolo manodidina azy efa talohaloha kokoa, ka ankehitriny dia miteny amin' ny fiteny aostrôneziana (ny Aeta sy ny Aty ao Filipina), na amin' ny fiteny môna-kmera (ny Samanga sy ny Senôy any Malezia). Amin' ireo fiteny ireo dia misy ny tsy ahitana foto-teny aostrôaziatika na aostroneziana fantatra. Ahitana soritra ny nisian' ny fiteny efa teo talohan' ireo fiteny tenenina ankehitriny izany.
Ny fiteny sasany dia tandindomin-doza. Ao Filipina, izay tsy ahitana afa-tsy Negritô miisa 15 000 any ho any (raha 35 000 izany tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-20), dia efatra amin' ny fiteniny (zay nitotaly telopolo any ho any) no tsy misy mpiteny intsony, ary ny sasany tandindomim-pahafatesana.
Ny toetra ara-batanaHanova
Nivoatra ny toetra ara-batan' ny Negritô any Filipina ka lasa keliray, angamba noho ny fifanentanana amin' ny ala mando sy noho izy monina a-nosy. Sahala amin' ny Pigmea, ny Negritô dia isan' ireo vahoaka keliray, vitsy anisa koa izy ireo ary tsy tena be mpahalala.
Tompon-tanin' i Tasmania
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Negritô&oldid=1045735"
Dernière modification le 14 Jiona 2022, à 10:21
Voaova farany tamin'ny 14 Jiona 2022 amin'ny 10:21 ity pejy ity.